China C-uqinisa ukulungiswa kweVulcanizing Cofa kwiRubber Belt Spot Ukulungisa umzi mveliso kunye nabenzi | UAntai
Ukuhambisa iBelt ngokudibeneyo kwiVulcanizers
IiVulcanizers eziDibeneyo zeBelt
I-PVC PU Belt edibeneyo yeVulcanizers
Ukulungiswa kweBelt Spot
Ukulungiswa kweBelt Edge
Ukulungiswa kwe-C-uqinisa ukulungiswa kweVulcanizing yoLungiso lweRubber Belt
YXhydraulic indawo Ukuhluza umatshini wokulungisa, okwaziwa ngokuba yi-C-clamp Ukulungisa indawo vulcanizer, ngu ukufudumeza kombane izixhobo zokulungisa yebhanti yokuhambisa. Ngexesha ukuhambisa ibhanti, umphezulu webhanti unokonakaliswa okanye ugqobhozwe yi dlulisaIzinto ezihleliweyo. Emva koko indawo Ukuhluza umatshini wokulungisa ingasetyenziselwa ukuyilungisa.
Lo matshini uqukethe isakhelo, iipleyiti ezimbini zokufudumeza, ilifti ehlanganisiweyo yesinyusi esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi kunye neebhokisi zombane. Isakhelo senziwe nge-alloy aluminium ephezulu, yona’I-smalsize, ephathekayo, ikhuselekile kwaye ithembekile. Lo matshini usetyenziselwa ikakhulu ukulungisa umonakalo ongaphantsi kwe-300 * 300mm.
Yenzelwe ukulungiswa ngokukhawuleza kunye nokusebenza okulula kumonakalo webala;
Uyilo lweDuawheels, yenza ukuhambisa kube lula;
Isakhelo sohlobo C esiluhlaza kunye nesirhabaxa, esikulungeleyo ukubeka indawo eyonakeleyo;
Ukuba indawo yomonakalo webhanti ayikho nkulu kakhulu, njengechaphaza, ibala okanye into ebunjiweyo, awudingi ukusebenzisa umatshini omkhulu ukuyilungisa. Ukulungiswa kwe-C-uqinisa ukulungiswa kweendaba kungayinto elungileyo. Uhlahlo-lwabiwo mali olusezantsi, kodwa lungisa ingxaki enkulu.
Imilinganiselo, L * W * H mm）
I-vulcanizer yebhanti ithembekile, ayisindi kwaye inomatshini ophathwayo, osetyenziswa kakhulu kwicandelo lesinyithi, imigodi, izityalo zamandla, amazibuko, izinto zokwakha, isamente, umgodi wamalahle, ishishini lamachiza, njl.
Indlela yokufaka isicelo
Hambisa umatshini kwindawo yokulungisa.
Gcwalisa iglu kwiindawo ezonakeleyo ezifuna ukulungiswa.
Beka isakhelo phantsi kwebhanti kwaye ulungelelanise nendawo eyonakeleyo.
Beka ipleyiti yokufudumeza esezantsi ngaphantsi kwendawo eyonakeleyo yebhanti uze ubeke isakhelo esingaphezulu.
Cinezela i-lever hydraulic de ifike kwinqanaba elaneleyo loxinzelelo.
Qhagamshela intambo ephambili kumthombo wamandla kunye nebhokisi yolawulo lombane. Kwaye emva koko uqhagamshele intambo yesibini kunye nebhokisi yolawulo kunye neepleyiti eziphezulu nezisezantsi.
Nceda uqaphele ukuba iyahambelana neempawu ezihambelanayo kwibhokisi yolawulo.
Vula ibhokisi yolawulo kwaye uqalise inkqubo yokulungisa i-vulcanizing.
Egqithileyo I-PU PVC Belt Vulcanizing Cofa kwiThermoplastic Belt Splice
Okulandelayo: Ukulungiswa kweNdawo yoLungiso yoLungiso lweeVenkile zeBelt
ICc Belt Vulcanization Cinezela
Isixhobo seendaba esiqhelekileyo seBelt Vulcanization
Icandelo leendaba leNylon Belt Vulcanization
ICandelo leVc Belt Vulcanization
Ukulungiswa kweNdawo yoLungiso yoLungiso lwe-Vulcanizing Press ...
Ukuba unemibuzo malunga neemveliso zethu okanye ixabiso, nceda ushiye imeyile yakho kuthi kwaye siya kuba kwebala zingadlulanga iiyure eziyi-24.